Ma waxaad doonaysaa siyaabo in dib iPhone jailbroken? Waxaa jira dhowr xal laga heli karaa si aad u damiyo jailbroken iPhone. Keddibna A celin doonaa qalabka sida ay jailbroken hor tiil, oo aad isticmaali karto iPhone sida a iPhone aan jailbroken. Waxaad u baahan tahay waxaan leeyahay shuqullo badan oo adag, laakiin kaliya Lugood ilaa iyo maalinta uu raaco jidka caadi ah in dib jailbroken iPhone sida lagu faray in this article. Waxa kale oo aad caawimaad ka qodobkan ku saabsan resetting iPhone oo aan laga badinin jailbroken iyo liiska qalab aad u isticmaali karto si ay u qabtaan talaabo dib u heli kartaa. Si kastaba ha ahaatee, u hubiso in ay sii gurmad ah ka hor inta la isticmaalayo tilmaamaha soo socda oo adiga kaa dhigi doonaa ammaan ka badiyay xog muhiim ah oo aad ku iPhone.
Qaybta 1. Warbixannada jailbroken iPhone si iPhone Caadi ah
Qaybta 2. Warbixannada jailbroken iPhone oo aan laga badinin Features jailbroken
Si fudud Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka hoos lagu qeexay in ay dib u jailbroken iPhone. Laakiin waxaad u baahan tahay in la tixgeliyo qaar ka mid ah talooyin ka hor fulinaya falalka kuwa.
Lugood on your computer u baahan tahay in la casriyeeyo.
Ka dhig gurmad ah lagama maarmaan u ah xogta qalab aad ka dib iyaga si loo soo celiyo.
Waqti ku filan si ay dib jailbroken xog gurmad iPhone iyo soo celinta qaado.
Samee 'shaqeyn qufulka' deminta haddii aad u gagadin. Waxaad ka heli kartaa fursad u here- Settings> iCloud> Hel My iPhone> On / Off.
Talaabada 1: Waxaad u baahan tahay inaad furaysto in aad telefoon si computer ah, hubi in uu u furo Lugood oo guji.
Talaabada 2: Hadda waxaad ka heli doontaa 'Soo Celinta' doorasho. Waa in aad guji ku yaal. Waxaad dib-up hayn karaa barnaamijyadooda aan jailbroken aad telefoonka ee si ay u soo celiyaan ka dib markii resetting. Waxaad mar iPhone qaadan doonaa ka dibna si download, Macdan iyo rakibi firmware cusub.
Talaabada 3: Lugood u baahan doontaa in aad ogolaansho mar kale in la soo celiyo qalabka.
Talaabada 4: Sug in aad iPhone heli in la billaabeen iyo dib u soo celin kartaa xog gurmad. Haddii aad leedahay helitaanka xogta aad gacanta, telefoonka soo celin doonaa si toos ah.
Talooyin: Maxaa ku dhici doona Iphone jailbroken ka dib markii Resetting ah?
Jailbroken Your ma aysan samayn wax isbeddel ah markii la sameeyo. Iyo Warbixannada caadiga ah oo kaliya ha iPhone loo soo celiyo si ay hab hore. Waxay ku siin doontaa telefoon si buuxda u shaqeeya sidii hore jailbroken laakiin gobolka a non-jailbroken.
Waxaa jira liiska qalabka waxaa lagu heli karaa si ay dib iPhone oo aan laga badinin jailbroken. Semi-Celinta, iLEX RAT, Wondershare SafeEraser, iwm yihiin qaar ka mid ah qalabka ugu caansan oo ugu wanaagsan shaqeeyay in line-kan wixii resetting iPhone oo aan laga badinin jailbroken.
Wondershare SafeEraser waa software ka wanaagsan resetting iPohne ka badiyay waxaa jailbroken iyo update cusub waa la jaanqaadaya si macruufka 9.0. Just mid click ka heli kartaa waxaad masixi oo dhan macluumaadka gaarka ah iyada oo inta badan wax ku ool ah iyo xogta ugu ammaanka badan hab ilaaliya. Waxaad ka heli kartaa waxa ay ka eeg xiriirka hoose si ay isugu dayaan oo lacag la'aan ah, laakiin haddii aad rabto in aad hesho dhammaan qaababka, waxaad la xisaabin doono app liisan. Waxay kaa caawin karaan inaad si dib u jailbroken iPhone aan lossing JAILBREAK ah .. Waa Video Tutorial in dib iPhone .
Price: Free in Isku day, iibsan Waa in USD $ 29.95 (liisanka Basic) / $ 39.95 (liisanka Family)
Download version maxkamad lacag la'aan ah:
Waa Semi-Celinta magaca resetting iPhone jailbroken in ay gobolka hore oo caan ah oo taariikhda ugu wanaagsan shaqayn ee macruufka 5.0-6.1.2. Software Tani waa diyaar u Windows & Linux x86_64 version leh 32 Inyar versions Linux iyo Mac OX ka yar tahay horumarka. Sameeysa A ka Windows iyo macruufka, Coolstar horumariyo Semi-Celinta ee macruufka 7.0.x jailbroken iPhone. Waxaad kala soo bixi kartaa ka eeg xiriirka hoose oo lacag la'aan ah.
iLEX Rat waa xal kale oo lagu jailbroken iPhone in dib qalabka oo aan laga badinin jailbroken, laakiin waxaa loo baahan yahay in straightly ordi ka qalab jailbroken in aad doonaysid in aad u qabtaan resetting. Waa barnaamijyadooda la mid ah sida Semi-Celinta, oo aad xor ka hoos ku link ama dukaanka Cydia soo bixi kartaa. Waxa loo baahan yahay in aan ku xirmaan kombiyuutar kasta, iyo waxay qaban karaan in macruufka 7 qalabka. The iLEX RAT macruufka 7 beta u baahan tahay in lagu xiro ka dib markii dheer ee app bakhaar ku Cydia.
> Resource > iPhone > celi Jaibroken iPhone la / aan laga badinin Features jailbroken